उनीहरूले बैठकमा आउने–नआउने जानकारी पार्टीमा नदिएको प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले बताए। ‘उहाँहरू आउने नआउने बारे मलाई केही जानकारी भएन। अध्यक्ष ज्यूलाई खबर गर्नुभएको भए थाहा भएन,’ आले, श्रेष्ठ र खतिवडाको अनुपस्थितिबारे प्रवक्ता खतिवडाले उकेरासँग भने।
सामुदायिक विद्यालयको घट्दो साख जोगाउन सरकारले २०७४ मा नमुना विद्यालयको कार्यक्रम ल्यायो। अभिभावक अनि विद्यार्थीहरूलाई सामुदायिक विद्यालयप्रति आकर्षित गर्न त्यही वर्ष एक सय विद्यालयलाई ’नमुना विद्यालय’ भनेर घोषणा पनि गर्‍यो। स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएसँगै विद्यालयहरू उसको जिम्मामा पुग्यो।....
रेशमका कपडा उत्पादन, डिजाइनिङ र व्यापारमा संलग्न जानकीले गोसाई भेन्चर र किम्बु द शेरी वर्ल्ड कम्पनी सञ्चालन गरेकी छिन्। किम्बु द शेरी वर्ल्ड कम्पनीले नेपालमा रेशम किरासँग सम्बन्धित र अर्गानिक वस्तुसँग सम्बन्धित रहेर एग्रो इको टुरिजम सम्बन्धी कार्य....
अदृश्य भावीको स्वागतमा सुत्केरी बस्ने कोठामा रातभर बत्ती बालिन्छ। भावीले नवजात शिशुको ललाटमा जन्मको छैटौं दिन केही लेख्छ भन्ने यो विश्वास नेपालको समाजमा व्यापक छ। भारतीय समाजमा त यो बिश्वास नेपालमा भन्दा पनि बढी छ। तर, कान्तिपुरमा नवजात....
यहाँ हामीले कुरा त प्रसव पीडा र खुसीको गर्छौं। तर मेरो जिन्दगीमा भने हरेक कुरा राजनीतिसँगै जोडिन पुग्छ। त्यसैले मेरो प्रसव पीडा र खुसीको साक्षी बनेको छ राजनीति। मेरो जन्म सम्पन्न परिवारमा भयो। पहिलो पटक एसएलसी दिँदा फेल....
उपप्रमुख इन्दिरा दरैका अनुसार छोरी २० वर्ष नपुग्दासम्म नगरपालिकाबाट लगाइने सम्पत्ति करलगायतका सबै करमा २० प्रतिशत छुट दिने नीति नगरसभाबाट पारित भएको हो। यस्तै नगरपालिकाले ‘आत्मनिर्भर छोरी, सशक्त व्यास नगर’ अभियानअन्तर्गत छोरीको २० वर्ष पुगेपछि मात्र विवाह गर्नेलाई नगद सहयोग....
तर प्रहरी अनि स्थानीय प्रशासनले थाहै नपाएजस्तै गर्ने गरेको स्थानीयको गुनासो छ। स्थानीयले बिहान २ देखि ३ बजेको बीचमा गस्ती बढाउन आग्रह गरे पनि प्रहरीले वास्ता नगरेको उनीहरूको गुनासो छ। बुटवलको कालिकानगरमा होराइजन चोकदेखि एक सय मिटर उत्तर पश्चिममा लर्ड....
एमालेले आज बसेको १८ औँ बैठकमा सरकारसँग भएको सहमति विपरीतका योजनाहरू बजेटमा समेटिएको भन्दै बैठक अवरुद्ध गरेको हो। गत माघ १८ गते सभामुख राजबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा एमाले र सत्तारुढ गठबन्धनबिच सात बुँदे सहमति समेत भएको थियो। उक्त सहमति अनुसार कुनै....
राष्ट्रियसभामा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले भने ‘करका दर बढाउँदा देश र जनतालाई हित गर्‍यो कि गरेन भन्ने मुख्य हो। बढाउनै पाइँदैन भन्ने होइन।' उनले कसैले राजीनामा माग्दैमा राजीनामा नदिने भन्दै बजेट देश र जनताको पक्षमा ल्याएको दाबी....
पन्ध्रौँ चुली पुस्तक नियात्रा जस्तो भए पनि विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको ऐतिहासिक पाटो पनि समेट्नु भएको रहेछ। लेखन यात्रा कस्तो रह्यो? पुस्तक धेरै विषयको समिश्रण जस्तो भएको छ। मेरो यो पहिलो पुस्तक हो। स्टोरी राइटिङ हिसाबले लेखेको पनि....
पठनमा रुचि भएको तपाईँ आफैँ पुस्तक प्रकाशक हुनुभयो। किन ? प्रकाशन गृह स्थापना नहुन्जेल एउटै काम लामो समय गर्नै सकिन। रुटिनमा बाँधिएर बस्न नसक्ने रहेछु म भन्ने बुझेँ। घर पोखरा, बस्न मन लाग्ने काठमाडौँ। काठमाडौँमा बस्न मन लाग्नुको एउटै....
साझा प्रकाशन अब कसरी अघि बढ्ला महाप्रबन्धक प्रह्लाद पोखरेलसँग उकेराकर्मी प्रजु पन्तले गरेको कुराकानी : तपाईँ बसेको कार्यकक्ष पनि टेको लगाएर अडिएको रहेछ साझा प्रकाशन त टेको कै भरमा छ कि क्या हो ? हो, हामी टेको लगाएर....
आलियाले सार्वजनिक गरेको फोटोमा उनका श्रीमान् रणवीर छेउमै बसेका छन्। उनीहरू दुवै मनिटरमा बच्चा हेरिरहेका छन्। अनि त्यही पोस्टको अर्को फोटोमा उनले सिंह, सिंहिनी र डमरुको फोटो शेयर गरेकी छिन्। अर्थात् उनको परिवार अब पूरा हुँदैछ। यतिबेला आलिया....
डा. दासका अनुसार संक्रमितमध्ये आठ जना पुरुष र चार जना महिला छन्। टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा तीन जना, पाटन अस्पतालमा दुई जना र वयोधा अस्पतालमा एक जना उपचाररत रहेको उनले जानकारी दिए। त्यसैगरी स्टार अस्पतालमा उपचार गराइरहेका....
टेकु अस्पतालमा भएका दुई संक्रमित दिदी बहिनी भएको र उनीहरूलाई पनि वार्डमा सारिएकाले खतरामुक्त भएको डा. दासले जानकरी दिए। ‘सुरुको दुई जनामध्ये एक जनाको अवस्था गम्भीर थियो। आईसीयूमा नै राख्नुपर्‍यो,’ निर्देशक डा. दासले भने, ‘उहाँहरू आज आईसीयूबाट वार्डमा आइसक्नुभयो।’....
‘यहाँ नगरेर रहेछ। गर्न सके जे काममा पनि कमाउन सकिन्छ। ३५/४० हजार कमाउन कहीँ कतै जानै पर्दैन। मात्र नेपालीले आफ्नो देशमा कर्म गर्नुपर्छ,’ बासुले भने। पेसाले पूर्णकालीन इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर बासुले पशुपालक बन्ने निधो गरे। उनले रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका....
उनले भने, 'कूल बजेटमध्ये १०.९५ प्रतिशत मात्रै शिक्षा क्षेत्रका निम्ति अपुग हुन्छ, सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढीकरणको लागि सरकार प्रतिबद्ध छ, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्ताव गर्दा १५औँ योजनालाई समेत आधार मानिएको छ, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा विद्यालय....
दिवसमा पट्यारलाग्दा भाषण सुनाउनुभन्दा बालबालिकालाई यस्तो काम गराए हुन्न !
यसबारे बेलले शनिबार ट्वीट गर्दै पुष्टि गरेका हुन्। उनले लेखेका छन्, ‘लस एन्जलस, चाँडै भेटौंला।’ उनले सोही पोस्टमा लस एन्जलस फुटबल क्लबलाई मेन्सन पनि गरेका छन्। बेल र क्लबबीच एक सिजनको सम्झौता हुने बताइएको छ। यसअघि बेल स्पेनिस....
पुस्तक लोकार्पणसँगै पत्रकार अमित ढकालको सहजीकरणमा समसामयिक अर्थ–राजनीतिक विषयमा विमर्शसमेत गरियो। कार्यक्रममा नेता गगन थापाले भने वाग्लेको यो पुस्तक नेपालको अर्थ–सामाजिक विषयमा रुचि राख्नेहरूका लागि बढी उपयोगी रहेको बताए। ‘पुस्तक सरकार सञ्चालनसँग गाँसिएका नीति, बजेट र आयोजनाबारेको टिप्पणीमा....
पुस्तकमाथि आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा डा.शोभाकर पराजुलीले पुस्तक एक पटक होइन पटक पटक पढ्नु पर्ने र पढे पछि नवीन सिकाई थपिँदै जाने बताए। पुस्तकका विषय वस्तुलाई विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने उनले बताए। यस्तै किशोर थापाले मालामा....
पुस्तकहरू १ रुपैयाँदेखि २८ सय रुपैयाँसम्मका छन्। बद्रीनाथ भट्टराईको २०२७ सालमा प्रकाशित कक्षा ६ को पाठ्यपुस्तक ‘अनुवाद–बोधीनी’ को मूल्य १ रुपैयाँ हो भने नीलमणि ढुंगानाको संस्कृत–नेपाली शब्दकोशको मूल्य २८ सय रुपैयाँ। प्रर्दशनीमा १५ सय पुस्तकहरू राखिएको साझा प्रकाशनकी कर्मचारी सुशीला आचार्यले बताइन्।....
कथालय इन्कले दुवै चित्रकथालाई नेपाली भाषामा प्रकाशित गरेको हो। यी चित्र पुस्तकहरूको नेपाली अनुवाद भिक्टर प्रधानले गरेका छन्। यी बाल पुस्तकलाई होड्डर र स्टोङ्टन् ( ह्याचेट चिल्ड्रेन ग्रुप) प्रकाशकले सन् २००७ मा बेलायतबाट प्रकाशित गरिसकेको छ। 'एमिली र....
लैङ्गिक हिसाबले हेर्दा कांग्रेसले ३१ प्रतिशत महिला केन्द्रीय कार्यसमितिमा निर्वाचित भएको देखाउँछ भने ६९ प्रतिशत पुरुष निर्वाचित भएका छन्। संविधानतः ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनुपर्ने भनिए पनि २ प्रतिशतले कम महिला निर्वाचित भएका छन्। कांग्रेसले यसअघि पदाधिकारी, खुला....